5 Waxyaabood oo ku saabsan Ted Cruz - BBC Somali
5 Waxyaabood oo ku saabsan Ted Cruz
Kaddib hadalada ku saabsan guusha Donald Trump ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee aqalka cad, ayey layaab noqotay inuu ku guuldareystay gobolka Iowa natiijadii ugu horeysay tartanka.
Hadaba waa kuma, muxuuse u taagan yahay Cruz?
Waxaa dhalay Rafael Edward Cruz, wuxuuna ku dhashay Canada. Hooyadii waa Mareykan, taasi oo ka dhigtay inuu labo dhalasho lahaado, una tartamo jagada madaxweynenimo ee Mareykanka. Aabihii waa Cuban yimid Mareykanka oo ka soo baxsaday taliskii Batista. Markii qoyskiisu u soo guureen Houston, Texas sanadkii 1974tii, ayuu magaciisa dhexe gaabiyay si uu bulshada u dhexgalo.
Saameyn weyn ayuu yeeshay markii ugu horeysay uu xafiiska yimid.
Wuxuu galay jaamacadda Princeton, wuxuuna ka shaqeeyay qeynuunka taasi oo ay ku jirto mar uu noqday xeer ilaaliye. Sanadkii 2012kii isagoo 42 jir ahaa, ayuu noqday Senator. Mudadii ugu horeysay howshiisa, ayaa lagu amaanaa inuu kaalin weyn ka qaatay markii howlaha dowladdu istaageen sanadkii 2013kii.
Musharaxnimadiisa ayuu ku dhawaaqay sanadkii 2016-dii, isagoo ballanqaaday inuusan ka tageynin mabaad'idiisa si loo doorto. Cruz wuxuu sheegay inuu ka laaban doono heshiiska nuklerka Iran iyo dib u qaabeynta habka caafimaadka Baraka Obama. Wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu ka hortagyo dagaalka caqiidada.
Ololihiisa ayey masiibo ku ahaan laheyd hadii Cruz looga adkaan lahaa Iowa, wuxuuna sare u qaaday in guul laga fisho. Wuxuu haystaa $20m uu ku ololeeyo iyo guddiyo siyaasadeed oo taageera.
Wuu awoodaa inuu ka adkaado Donald Trump.
Waa muuqataa inuu Iowa ku guuleystay, waxaana muhiim ah in natiijadii ugu horeysay ololaha aysan noqon sidii Trump doonayay.
Xubnahii hore ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa ka welwelsan maamulka Trump maadama aan la ogeyn siyaasadiisa, Dhinaca kalena, way ka welwelsan yihiin maamulka Cruz, waxayna u arkaan nin ay dhabtii ogyihiin waxa uu yahay oo afkaaraha ay kala weynyihiin xisbiga. Wuxuu si fudud ku noqon karaa madaxweynahii ugu jamhuurisanaa ee la doorto waqtigan.